Kubata Mimba Uchiyamwisa Kubata Mimba Uchiyamwisa
Kubata Mimba Uchiyamwisa
"Mukadzi akabata pamuviri achiyamwisa mwana anopihwei kana kuti ungamurape sei?"
Kana ukabvunza vanhu vava vachembere kumusha mubvunzo uyu. vanotovhunduka nokuti kare vaifunga kuti pane chakaipa chinoitika kana mai vemwana vakabata mimba vachiri kumwisa mwana. Kunonzi kumwisira. Unohwa vachitaura vachiti.
"Mai Natsai vakamwisira mwana akarwara akaendeswa kuchipatara." Mufungwa dzavo vanenge vachitotira chokwadi asi ingari yokuti havahwisisi kuti kugwara kwemwana nokumwa kwake mukaka hazvina pazvinoenderana. Unokwanisa umwisa mwana mukaka une mimba kusvika wazvara rusvava, ugomwisa vese vari vaviri kana une mukaka wakakwana.
Chinhu chimwe chete chakaipa pakumwisa vana vaviri ndechokuti paunozvara mwana mukaka wekutanga mukaka wakakosha pamwana paanozvagwa nokuti une zvinodzivirira zvigwere uye unozvokudya zvakakoshera rusvava. Saka zvoreva kuti kana ukaramba uchimwisa mwana mukuru unokwanisa kuramba uchigadzira mukaka wemwana mukuru pane kutangazve werusvava. Chete chete ndicho chinhu chingaita dambudziko asi hazvinei nokugwara kwako iwe kana kuti kwemwana.
Zvigwere zvinokonzegwa neutachiona kana kuti ne POIZENI. Mukaka unorapa zvigwere uye unodzivirira kushanda kwepoizeni, saka hapana chakaipa pakuti mwana wako mukuru kana mudiki amwe mukaka.
Saka apa ndiri kuti pamumbunzo uyu hwisisa kuti hapana chinodiwa mushonga. Hapana chigwere. Hapana utachiona. Hapana poizeni. Hapana chakaipa kuna mai vemwana, kumwana ari mudumbu kana kuti kumwana ari kumwiswa mukaka. Vese vari vatatu vanokwanisa kuramba vakadaro kusvika uyu ari mudumba azvagwa uyu umwe achingomwa mukaka.
Asi Pakurera vana hazvishandi kumwana mukuru kuti uzozama kumurumura wava kutomwisa umwe mwana. Zvisinei kuti wabata mimba papi, Ngatihwisise kuti unokwanisa kubata mima kwapera vhiki mbiri wazvara mwana, kana usingaterera varapi vanokuudza kuti mirai kuisana kusvika muviri wadzokera pawange uri usina mimba. Zvinotora vhiki nhanhatu (6 weeks). Kotizve kumwisa mwana kunoderedza mukana wekubata mimba nokuda kwekuti ma HORMONES anogadzira mukaka anoderedza maHORMONE anokandirisa mazai. Zvoreva kuti kana uchimwisa unonoka kubata mimba.
Asi dai waibata mimba nokukasira sokuti mwedzi mitatu, unokwanisa kuramba uchimwisa mwana kusvika wasvika pamwedzi mutanhatu uchimwisa, sezvinokurudzigwa kuti mwisa vana mwedzi mitanhatu kana kupfuura. Iwe nemimba yako ukasvika iyoyo mitahatu chirumura hako uchironga yokugadzirira uyu mwana mutsva.
Asi zvoreva kuti wamwisira kwemedzi mitatu. Hapana kana chakaipa chingaitika kumwana kana kuti kwauri iwe. Dzikamisa hana uite mabasa ako emumba uye kuhwisisa kuti kuvata nomurume wako hapachakaipa chinoitika chichiti chaitiswa nokuti wamwisa mwana. Kune vanhukadzi munyika dzakawandisa vanomwisira, pamwe vachiziva, pamwe vasingazivi kuti vanemimba. Hauna kumbohwa munhu akaenda kuchipatara akati auya nokuti amwisira, kana mwana akenda kuchipatara akahi amwisigwa. Hakuna zvakadaro zvinoitika.
Usatyira Murume/mukadzi wako.
Hana chakaipa chinoitika.
Udzai vamwe! Extracted From Mai Chibwe VekwaZimuto - Kubata Mimba Uchiyamwisa.